sameer, Author at visualnepal
sameer 41 posts0comments
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – सोचेको काम बनाउन समय र धन दुबै पक्षमा अनावश्यक खर्च बढ्नसक्छ । व्यवसायमा थप लगानी बढाउन उपयुक्त समय छैन । लामो दूरीको यात्रा र वैदेशिक कामकाजमा पनि भनेजस्तो फाइदा लिन सकिंदैन, धेरै टाढा जानु…
sameer	 Dec 9, 2021 0
तपाईलाइपनि अनौठो लागेको हुनुपर्छ कसैले कलिलै उमेरमा ह्वात्तै पैसा कमाउन थाल्छन् । उदाहरणका लागि अशोक दर्जी, सचिन परियाल, कमला घिमेरेहरु हेर्नुहोस् न भाडाकुटी खेल्ने उमेरमा नै पैसा र नाम कमाउन थाले । यो उनीहरुले जन्मिदै लिएर आएको योग हो ।…
साँझको ७ बजेपश्चात तपाईँले गर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी भूलहरू– १. लुगा नफेरि अनेक काम गर्ने घर पुग्ने बित्तिकै अधिकांश व्यक्तिहरू अल्छी बन्न थाल्छन्। थकाई लागेको छ भन्दै कोहि बिस्तारामा पल्टिन्छन् भने कोहि लुगा नफेरि हातमुख नधोई…
मानिसले आफ्नो खुट्टामा कालो धागो लगाउने गर्छन । कसैलाई नराम्रो नजर वा शक्तिले दुख दिएमा कालो धागी बाध्ने सल्लाह दिइन्छ । तर हरेकको लागि कालो धागो लगाउनु राम्रो हो? कालो धागोले नराम्रो शक्तिलाई मात्र नभई नराम्रो नजरबाट पनि बचाउछ ।ज्योतिष…
पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशको समानान्तरताका रूपमा फेङ्स्वेमा काठ, आगो, स्वर्ण, जल र पृथ्वीलाई उल्लेख गरेको पाइन्छ । तात्विक रूपमा यी तत्वका बीचमा पृथक्ता छैन । उपर्युक्त पञ्चतत्वलाई प्राचीन स्थापत्य वेदका विद्वान्हरूले समुचित प्रयोग गरी…
१. माछा खान नजान्नेका लागि सर्वप्रथम त यो जान्नु जरुरी हुन्छ कि माछाको मासु खाँदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यदाकदा यसको काँडाले कतिपयको ज्यान समेत गएको सुनिन्छ। त्यसैले, माछाको मासु खान गाह्रो लाग्ने व्यक्तिहरूले सकभर माछा नखाँदै…
लामो समयसम्म कपाल कडा भएमा त्यो थाइपरथाइरायडिज्म रोगको संकेत हुन सक्छ । यस्तो रोगले थाइरायड ग्लान्डलाई बढी सक्रिय बनाउँछ ।जसका कारण तीव्र गतिमा तौल घट्ने पनि समस्या हुन्छ । दैनिक कपाल झर्ने समस्या भएमा त्यो डायबिटिज या अलोपेसिया…
भनिन्छ, महिला र पुरुष एक रथका दुई पांग्रा हुन्। त्यसैले एक बिना अर्को अधुरो र अपुरो नै हुन्छ। त्यसमाथि पनि महिला र पुरुषबीचको सम्बन्ध सदियौं पुरनो हुनुका साथै कहिले कहिँ यो विषयमा बहस र विवाद पनि हुने गर्छ। पितृसतात्मक समाजमा महिलालाई…
शास्त्र र पुराणहरुमा हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएका कही यस्ता आदतहरुको दाबी गरिएको छ, जुन हेर्दा सामान्य लागछ, तर वास्तवमा हामीलाई आउँन लागेको समयको बारेमा । यदि तपाई पनि शास्त्रलाई मान्नुहुन्छ भने तपाईका लागि केही जानकारी निम्न छन् १.…